အစိုးရ နဲ့ စစ်တပ်ကြားက အမြတ်ကြီး ထွက်နေကြသူများ ( သို့ ) ထိုင်းနယ်စပ် က တရုတ်တို့ မြို့သစ် – Na Pann San
” ထောက် ခံ ရ မ လား ကန့် ကွက် ရ မ လား ”
ကရင်ပြည်နယ် ထိုင်းနယ်စပ်မှာ တရုတ်တို့ မြို့သစ် တစ်ခု တည်ဆောက်နေတာကြာပြီ..။ ရွှေ ကု က္ကို ဆို တဲ့ မြို့ သစ် ပါ ။
အဲ့ ဒီ မြို့ သစ် က တ ရုတ် တွေ ဆောက် လုပ် နေ တာ ဆို ပေ မယ့် တ ရား ဝင် တ ရုတ် နိုင် ငံ က ဆောက် လုပ် နေ တာ မ ဟုတ် ဘူး ။ မြန် မာ နိုင် ငံ ဖက် က လည်း တ ရား ဝင် ဗ ဟို အ စိုး ရ က စီ မံ ကိန်း ချ ဆောက် လုပ် နေ တာ မ ဟုတ် ဘူး ။
တရုတ် ဖက် က ၂၀၁၂ ခု နှစ် က ထောင် က လွတ် လာ တဲ့ Wan Kuak – Kui ( ဝမ် ကော့ ကွိုင် ) ဆို သူ နဲ့ မ လေး ရှား လုပ် ငန်း ရှင် တစ် ယောက် ပူး ပေါင်း ပြီး မြန်မာဖက် က ကရင် နယ်ခြား စောင့်တပ် ( BGF ) နဲ့ သ ဘော တူညီချက်ယူ ပြီး တည် ဆောက် နေတာ လို့ဆိုတယ် ။
BGF ဖက် က ၂၀ % နဲ့ တ ရုတ် ဖက် က ၈၀ % အ ကျိုး အ မြတ် ခွဲ ဝေ မယ် လို့ ဆို တယ် ။ အဲ့ ဒီ မြ ဝ တီ ရဲ့ ရွှေ ကု က္ကို မြို့ သစ် စီ မံ ကိန်း မှာ က မ္ဘော ဒီး ယား က နှင် ထုတ် ခံ လိုက် ရ တဲ့ လောင်း က စား ဝိုင်း ( ကာ ဆီ နို ) တွေ လည်း ပါ တယ် လို့ ဆို တယ် ။ ဟောင် ကောင် အ ခြေ စိုက် ကု မ္ပ ဏီ Yatai က တည် ဆောက် နေ တာ လို့ ဆို တယ် ။ ref: VOA Burmese news.
အ ခု မြန်မာ ဗဟို အစိုးရက စုံစမ်းမယ် လို့ တော့ သတင်းထွက်လာတယ် ။
အဲ့ ဒီ မြ ဝ တီ ရွှေ ကု က္ကို မြို့ သစ် စီ မံ ကိန်း က က ရင် ပြည် နယ် အစိုးရ နဲ့ ကော ပတ်သက်မှု ရှိမရှိ ၊ က ရင် ပြည် နယ် အ စိုး ရ ထောက် ခံ ချက် ရှိ မ ရှိ ဆို တာ လည်း မ သိ ပါ ဘူး ။
မရှိဘူး ဆို ရင် ဘယ် သူ့ ထောက် ခံ ချက် သ ဘော တူ ညီ ချက် နဲ့ လုပ် သ လဲ ၊ ရှိ တယ် ဆို ရင် ကော ဘယ် သူ့ ထောက် ခံ ချက် ပေး ပြီး ဘယ် လို သ ဘော တူ ညီ ချက် နဲ့ လုပ် သ လဲ ဆို တာ အ နည်း ဆုံး က ရင် ပြည် သူ တွေ သိ ရ မှာ ပေါ့ ။ဘာ ဖြစ်လို့လဲဆို တော့ နိုင် ငံ ခြား ရင်း နှီး မြုတ် နှံ သူ တွေ က ကိုယ့် ပြည် နယ် ထဲ မှာ အ ကြီး အကျယ် အခိုင် အခန့် လာ တည် ဆောက် ကြ ပြီး နောင် တစ် ချိန် နိုင် ငံ ခြား သား တွေ ပါ လာ နေ မယ့် နေ ရာ ဖြစ် နေ လို့ ပဲ ။
တစ်ဖက်က တွေး ရ ရင် မြန် မာ နိုင် ငံ ကို မျိုးစုံ ဖိအား ပေး ပြီး တစ် ခု ပြီး တစ်ခု တောင်း ဆို ဆောင် ရွက် နေတဲ့ တ ရုတ် အစိုးရ မဟုတ်ဘူး ။ ပြော ရ ရင် တ ရုတ် အစိုးရ ရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက် က လူ တွေ ။ ဒီ တော့ တရုတ် နိုင်ငံ က လုပ်သလို တစ်ဖတ်သတ် ဖိအား ပေး လုပ်ကိုင် ပြီး ရေ ရှည် မှာ ကုလားအုပ် မိုး ခို သ လို အ ပိုင် ကိုင် ထား မယ့် စီ မံ ကိန်း မျိုး ဖြစ် ချင် မှ ဖြစ် မယ် ။ ( ပြော လို့ တော့ မ ရ ဘူး ပေါ့ )
တစ်ဖက်က ပြောရရင် ကိုယ့် နိုင်ငံထဲ အ ကြီး ကြီး လာလုပ် နေတာ ကိုယ့် နိုင် ငံ အာဏာရှိ အစိုးရ က ဘာမှ မသိရတဲ့ ကိစ္စ ။
တ ခြားဖက်က ကြည့် ရင် မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ ဘက်ဂျက် ခွဲ ဝေ မှု အ ပြင် နိုင်ငံက တိုးတက် မှု နှေး တော့ ပြည်နယ် တွေမှာ တိုးတက် နှုန်း နှေးလွန်းတယ် ။ ဗဟို အ စိုးရကို ပြည် နယ် တွေ အ ရမ်း အား ကိုး လို့ မ ရ တာ ဒီ မို က ရေ စီ ဆယ် နှစ် မှာ မြင် ခဲ့ ရ ပြီး ပြီ ။ ဒါ ကြောင့် ကိုယ့် အား ကိုယ် ကိုး တယ် ပြော ရင် ဖြေ ရ ခက်တယ် ။
နောက်တ ခြားဖက် က ကြည့် ပြန်ရင် ဖက်ဒရယ် စနစ် မျိုးမဟုတ် သေးပဲ ဗ ဟို ချုပ် ကိုင် မှု လို သွား နေ တဲ့ မြန် မာ နိုင် ငံ ရေး အ ရ တ ရား မ ဝင် ပြန် ဘူး ။ မ သိ ဟန် ဆောင် လိုက် ရင် အ စ ရှိ အ နှောင် နှောင် နေ ရာ စုံ မှာ ဆက် ဖြစ် လာ နိုင် တယ် ။
အခုလို က ရင် ပြည် နယ်ထဲ မှာ တည် ဆောက် ရေး လုပ် ငန်း ကြီး လုပ် နေ တာ ဖက် ဒ ရယ် စ နစ် ပီ ပြင် နေ ရင် ဗ ဟို အ စိုး ရ နဲ့ မ ဆိုင် တော့ ဘူး ။ ပြည် နယ် အ စိုး ရ သ ဘော တူ ရင် ရ တယ် ။ ဖက် ဒ ရယ် စ နစ် ပီ ပြင် ဖို့ က ခြေ ဥ ပြင် ရ မယ် ။ အ နည်း ဆုံး ပုဒ် မ ၂၆၁ ပြင် ပြီး ဖြစ် ရ မယ် ။
မြန်မာ နိုင် ငံ ရေး က စစ် တပ် ရယ် ရွေး ကောက် ခံ အ စိုး ရ ရယ် ဆို ပြီး နှစ် ပိုင်း တွေ့ ရ တယ် ။ အဲ့ ဒီ နှစ် ပိုင်း အ ဆင် ပြေ မှ တိုင်း ရင်း သား တွေ အ လို ရှိ တဲ့ ဖက် ဒ ရယ် ဆို တာ မျှော် လင့် လို့ ရ မယ် ဆို တာ ၄၅ ဦး ကော် မ တီ နဲ့ ၂၆၁ ကို ကြည့် ရင် သိ နိုင် တယ် ။
ဒါ ပေ မဲ့ တချို့ ( အ နည်း စု လား အ များ စု လား မ သိ ပါ ) တွေ က စစ်တပ် နဲ့ ရွေး ကောက်ခံ အ စိုး ရ သင့် မြတ် သွားမှာ ကို ပုံစံ အမျိုးမျိုး နဲ့ ကြောက် နေ ကြတာ လက်ရှိ မ ကြာခင်က Hot ဖြစ် ခဲ့ တဲ့ အ နု ပညာ သမား တွေ ကိစ္စမှာ သိသာခဲ့တယ် ။
မြန် မာ နိုင် ငံမှာ အ စိုး ရ နဲ့ စစ်တပ် သင့် မြတ် သွား မှာ ကို မလိုလား ကြ တဲ့သူ တွေ ကို အ ပြင် မှာ လူ ကောင် လုံး လိုက် ကို အ များ ကြီး မြင် ဖူး ပါ တယ် ။ အ ထူး သ ဖြင့် NLD နဲ့ စစ် တပ် သင့် မြတ် သွား ကြ မှာ ကို NLD ထောက် ခံ သူ တွေ ကိုယ်တိုင် မ လိုလားတာ မြင် အောင် ကြည့်ရင် မြင်ပါလိမ့် မယ် ။
ပထဝီ နိုင် ငံ ရေး ၊ က မ္ဘာ့ နိုင် ငံ ရေး ၊ မြန် မာ နိုင် ငံ ရေး ၊ သ မိုင်း နိုင် ငံ ရေး အ သေ အ ချာ နား မ လည် ပဲ လား နား လည် ပါ ရဲ့ နဲ့ လား မ သိ မြန် မာ နိုင် ငံ မှာ စစ် တပ် မ ရှိ လည်း ရ တယ် NLD မ ရှိ လို့ မ ရ ဘူး ဆို တဲ့ သ ဘော မျိုး တိုင်း ရင်း သား လက် နက် ကိုင် တစ် ရာ ( ၁၀၀ ) လောက် ရှိ တဲ့ မြန် မာ နိုင် ငံ ထဲ မှာ ပြော နေ ကြ တာလည်း တွေ့ ရ တယ် ။
ရွှေ ကု က္ကို ဆို တဲ့ မြို့ သစ်
NLD နဲ့ စစ်တပ် နဲ့ မသင့် မြတ် ရင် တိုင်း ပြည်ကို အခုလို အ ခြေ အ နေ အတိုင်း ဖြစ် နေ မှာ ပဲ ။ အ မျှော် အ မြင်နည်း တဲ့ စ ကား တွေနဲ့ စည်းရုံး တာ မျိုး တွေ သွေး ခွဲတာ မျိုး တွေ ကိုယ် တွေ က စ ပြီး ရပ်လိုက်သင့် ပြီ လို့ ယူ ဆ တယ် ။
နိုင် ငံ အခုလို အ ခြေ အ နေ အတိုင်း ဖြစ် နေတာကို ဘယ်သူ တွေ ပို ကြိုက် နေ ကြလဲ ၊ ဘယ်သူ တွေပို အကျိုး ဖြစ် နေ ကြလဲ ဆိုတာကို မျက် စိ နည်း နည်း ပို ဖွင့် ပြီး နောက် ကို ကျော် ကြည့် ကြည့် ပါ လို့ နည်း နည်း ပြော ချင် ပါ တယ် ။
အမှန်ကို မ မြင် နိုင် ရင် မေး ပါ ။ ကိုယ်ထင်တာ နဲ့ လျောက် ပြော လျှောက် လော် မ နေ ကြပါ နဲ့ ။
မြန်မာ နိုင်ငံကို ပေါင်မုန့် နဲ့ ဒိန်ခဲ စား ပြီး ချစ် ပြ နေ ကြ တာ တွေ ၊ aircon ခန်း ထဲ ဝိုင် ( wine ) သောက် ပြီး စည်း လုံး ရ မယ့် ၂ ဖွဲ့ ကို ရန် တိုက် ပေး နေ ကြ တာ တွေ က နေ တ ကယ် ဖြစ် သင့်တာ တွေ တတ်စွမ်းသ လောက် အ ပြု သ ဘော အ ကြံ မျိုး ထောက် ပြ တာ တိုက် တွန်း တာ မျိုး ကို ပြောင်း လိုက် ကြ ဖို့ အ ချိန် ရောက် သင့် ပြီ ။
တလ ကို သိန်း ၅၀ က နေ သိန်း ၃၀၀ လောက် အထိ ဝင် ငွေ ရှိတဲ့ သူ တွေ သဲသဲ လှုတ် ပြ နေ ကြ တဲ့ အချိန် မှာ တစ်ဧက ကို တစ် သိန်း တောင် မကျန် လို့ က လေး ကျောင်းစရိပ် အတွက်ပါ စိတ် ပူ နေ ရတယ် လို့ ၈ ရက် နေ့ စ နေ နေ့ က ပြည် ရွှေ တောင်ကို သွား တော့ ရွာ ခံ မြို့ ခံ က ပြော တယ် ။
မ လေးရှား မှာ မြန်မာအ လုပ် သမား တွေ တစ်ပတ် ကို ၂ ယောက် လောက် ကိုယ့် ကိုယ် ကိုယ် သတ် သေ နေ ကြတယ် ။ အ ခု လို ပဲ မ စည်း ရုံး လို့ ၊ မ တိုး တက် လို့ ၊ မ ချမ်း သာ လို့ ၊ ခြေ ဥ မ ပြင် ရ သေး လို့ ၊ ၂၅% ရှိ နေ သေး လို့ နဲ့ သာ အ ကြောင်း ပြ နေ ရင် ပြည် နယ် တွေအား လုံး UWSA ” ဝ ” ကို လက် ညိုးထိုး ထောက် ပြ လာ ကြ လိမ့် မယ် ။
ဗဟို အစိုးရကို စောင့် နေ ရင် ဘယ် တော့မှ ဖြစ် မှာ လဲ ၊ ဘယ် တော့မှ မ ဖြစ်ဘူး ဆို တဲ့ အ သံ တွေ ကျယ် လာ လိမ့် မယ် ။
က ရင် ပြည်နယ် က ရွှေ ကု က္ကို မြို့ သစ် ကိစ္စ က ရေ ရှည် အတွက် စဉ်းစားရင် ဗဟိုအစိုးရ အတွက် မ ကောင်း ဘူး ။ ဒေ သ ခံ တွေ ဖက်က ကြည့် ရင် သူ တို့ အ တွက် အကျိုးရှိတယ် ။
ကြား က ပြည် သူ က ထောက်ခံရ မလား ကန့် ကွက်ရမလား ဆို တာ တော်တော် ဆုံး ဖြတ်ရခက်ပါတယ် ။
ဒါ တွေ ကျော် ဖြတ် နိုင် ဖို့ က ဖက်ဒရယ် ဖြစ်လာမှ လို့ ပြောရမှာ ဖြစ် ပြီး ၊ ဖက်ဒရယ် ဖြစ် ဖို့ က စစ်တပ် နဲ့ အစိုးရ အ ဆင် ပြေ ဖို့လိုတယ် ။
သူတို့ အ ဆင် ပြေ ဖို့ တွေးမလား ၊ စစ်တပ် မရှိလည်း ရတယ်လို့ ဝိုင်း လော် ကြ မ လား ။
မိုး တင့် ဆွေ ၁၁ ၊ ၈ ၊ ၂၀၂၀ ဗု ဒ္ဓ ဟူး ။
” ထောကျ ခံ ရ မ လား ကနျ့ ကှကျ ရ မ လား ”
ကရငျပွညျနယျ ထိုငျးနယျစပျမှာ တရုတျတို့ မွို့သဈ တဈခု တညျဆောကျနတောကွာပွီ..။ ရှေ ကု က်ကို ဆို တဲ့ မွို့ သဈ ပါ ။
အဲ့ ဒီ မွို့ သဈ က တ ရုတျ တှေ ဆောကျ လုပျ နေ တာ ဆို ပေ မယျ့ တ ရား ဝငျ တ ရုတျ နိုငျ ငံ က ဆောကျ လုပျ နေ တာ မ ဟုတျ ဘူး ။ မွနျ မာ နိုငျ ငံ ဖကျ က လညျး တ ရား ဝငျ ဗ ဟို အ စိုး ရ က စီ မံ ကိနျး ခြ ဆောကျ လုပျ နေ တာ မ ဟုတျ ဘူး ။
တရုတျ ဖကျ က ၂၀၁၂ ခု နှဈ က ထောငျ က လှတျ လာ တဲ့ Wan Kuak – Kui ( ဝမျ ကော့ ကှိုငျ ) ဆို သူ နဲ့ မ လေး ရှား လုပျ ငနျး ရှငျ တဈ ယောကျ ပူး ပေါငျး ပွီး မွနျမာဖကျ က ကရငျ နယျခွား စောငျ့တပျ ( BGF ) နဲ့ သ ဘော တူညီခကျြယူ ပွီး တညျ ဆောကျ နတော လို့ဆိုတယျ ။
BGF ဖကျ က ၂၀ % နဲ့ တ ရုတျ ဖကျ က ၈၀ % အ ကြိုး အ မွတျ ခှဲ ဝေ မယျ လို့ ဆို တယျ ။ အဲ့ ဒီ မွ ဝ တီ ရဲ့ ရှေ ကု က်ကို မွို့ သဈ စီ မံ ကိနျး မှာ က မ်ဘော ဒီး ယား က နှငျ ထုတျ ခံ လိုကျ ရ တဲ့ လောငျး က စား ဝိုငျး ( ကာ ဆီ နို ) တှေ လညျး ပါ တယျ လို့ ဆို တယျ ။ ဟောငျ ကောငျ အ ခွေ စိုကျ ကု မ်ပ ဏီ Yatai က တညျ ဆောကျ နေ တာ လို့ ဆို တယျ ။ ref: VOA Burmese news.
အ ခု မွနျမာ ဗဟို အစိုးရက စုံစမျးမယျ လို့ တော့ သတငျးထှကျလာတယျ ။
အဲ့ ဒီ မွ ဝ တီ ရှေ ကု က်ကို မွို့ သဈ စီ မံ ကိနျး က က ရငျ ပွညျ နယျ အစိုးရ နဲ့ ကော ပတျသကျမှု ရှိမရှိ ၊ က ရငျ ပွညျ နယျ အ စိုး ရ ထောကျ ခံ ခကျြ ရှိ မ ရှိ ဆို တာ လညျး မ သိ ပါ ဘူး ။
မရှိဘူး ဆို ရငျ ဘယျ သူ့ ထောကျ ခံ ခကျြ သ ဘော တူ ညီ ခကျြ နဲ့ လုပျ သ လဲ ၊ ရှိ တယျ ဆို ရငျ ကော ဘယျ သူ့ ထောကျ ခံ ခကျြ ပေး ပွီး ဘယျ လို သ ဘော တူ ညီ ခကျြ နဲ့ လုပျ သ လဲ ဆို တာ အ နညျး ဆုံး က ရငျ ပွညျ သူ တှေ သိ ရ မှာ ပေါ့ ။ဘာ ဖွဈလို့လဲဆို တော့ နိုငျ ငံ ခွား ရငျး နှီး မွုတျ နှံ သူ တှေ က ကိုယျ့ ပွညျ နယျ ထဲ မှာ အ ကွီး အကယျြ အခိုငျ အခနျ့ လာ တညျ ဆောကျ ကွ ပွီး နောငျ တဈ ခြိနျ နိုငျ ငံ ခွား သား တှေ ပါ လာ နေ မယျ့ နေ ရာ ဖွဈ နေ လို့ ပဲ ။
တဈဖကျက တှေး ရ ရငျ မွနျ မာ နိုငျ ငံ ကို မြိုးစုံ ဖိအား ပေး ပွီး တဈ ခု ပွီး တဈခု တောငျး ဆို ဆောငျ ရှကျ နတေဲ့ တ ရုတျ အစိုးရ မဟုတျဘူး ။ ပွော ရ ရငျ တ ရုတျ အစိုးရ ရဲ့ ဆနျ့ကငျြဖကျ က လူ တှေ ။ ဒီ တော့ တရုတျ နိုငျငံ က လုပျသလို တဈဖတျသတျ ဖိအား ပေး လုပျကိုငျ ပွီး ရေ ရှညျ မှာ ကုလားအုပျ မိုး ခို သ လို အ ပိုငျ ကိုငျ ထား မယျ့ စီ မံ ကိနျး မြိုး ဖွဈ ခငျြ မှ ဖွဈ မယျ ။ ( ပွော လို့ တော့ မ ရ ဘူး ပေါ့ )
တဈဖကျက ပွောရရငျ ကိုယျ့ နိုငျငံထဲ အ ကွီး ကွီး လာလုပျ နတော ကိုယျ့ နိုငျ ငံ အာဏာရှိ အစိုးရ က ဘာမှ မသိရတဲ့ ကိစ်စ ။
တ ခွားဖကျက ကွညျ့ ရငျ မွနျ မာ နိုငျ ငံ မှာ ဘကျဂကျြ ခှဲ ဝေ မှု အ ပွငျ နိုငျငံက တိုးတကျ မှု နှေး တော့ ပွညျနယျ တှမှော တိုးတကျ နှုနျး နှေးလှနျးတယျ ။ ဗဟို အ စိုးရကို ပွညျ နယျ တှေ အ ရမျး အား ကိုး လို့ မ ရ တာ ဒီ မို က ရေ စီ ဆယျ နှဈ မှာ မွငျ ခဲ့ ရ ပွီး ပွီ ။ ဒါ ကွောငျ့ ကိုယျ့ အား ကိုယျ ကိုး တယျ ပွော ရငျ ဖွေ ရ ခကျတယျ ။
နောကျတ ခွားဖကျ က ကွညျ့ ပွနျရငျ ဖကျဒရယျ စနဈ မြိုးမဟုတျ သေးပဲ ဗ ဟို ခြုပျ ကိုငျ မှု လို သှား နေ တဲ့ မွနျ မာ နိုငျ ငံ ရေး အ ရ တ ရား မ ဝငျ ပွနျ ဘူး ။ မ သိ ဟနျ ဆောငျ လိုကျ ရငျ အ စ ရှိ အ နှောငျ နှောငျ နေ ရာ စုံ မှာ ဆကျ ဖွဈ လာ နိုငျ တယျ ။
အခုလို က ရငျ ပွညျ နယျထဲ မှာ တညျ ဆောကျ ရေး လုပျ ငနျး ကွီး လုပျ နေ တာ ဖကျ ဒ ရယျ စ နဈ ပီ ပွငျ နေ ရငျ ဗ ဟို အ စိုး ရ နဲ့ မ ဆိုငျ တော့ ဘူး ။ ပွညျ နယျ အ စိုး ရ သ ဘော တူ ရငျ ရ တယျ ။ ဖကျ ဒ ရယျ စ နဈ ပီ ပွငျ ဖို့ က ခွေ ဥ ပွငျ ရ မယျ ။ အ နညျး ဆုံး ပုဒျ မ ၂၆၁ ပွငျ ပွီး ဖွဈ ရ မယျ ။
မွနျမာ နိုငျ ငံ ရေး က စဈ တပျ ရယျ ရှေး ကောကျ ခံ အ စိုး ရ ရယျ ဆို ပွီး နှဈ ပိုငျး တှေ့ ရ တယျ ။ အဲ့ ဒီ နှဈ ပိုငျး အ ဆငျ ပွေ မှ တိုငျး ရငျး သား တှေ အ လို ရှိ တဲ့ ဖကျ ဒ ရယျ ဆို တာ မြှျော လငျ့ လို့ ရ မယျ ဆို တာ ၄၅ ဦး ကျော မ တီ နဲ့ ၂၆၁ ကို ကွညျ့ ရငျ သိ နိုငျ တယျ ။
ဒါ ပေ မဲ့ တခြို့ ( အ နညျး စု လား အ မြား စု လား မ သိ ပါ ) တှေ က စဈတပျ နဲ့ ရှေး ကောကျခံ အ စိုး ရ သငျ့ မွတျ သှားမှာ ကို ပုံစံ အမြိုးမြိုး နဲ့ ကွောကျ နေ ကွတာ လကျရှိ မ ကွာခငျက Hot ဖွဈ ခဲ့ တဲ့ အ နု ပညာ သမား တှေ ကိစ်စမှာ သိသာခဲ့တယျ ။
မွနျ မာ နိုငျ ငံမှာ အ စိုး ရ နဲ့ စဈတပျ သငျ့ မွတျ သှား မှာ ကို မလိုလား ကွ တဲ့သူ တှေ ကို အ ပွငျ မှာ လူ ကောငျ လုံး လိုကျ ကို အ မြား ကွီး မွငျ ဖူး ပါ တယျ ။ အ ထူး သ ဖွငျ့ NLD နဲ့ စဈ တပျ သငျ့ မွတျ သှား ကွ မှာ ကို NLD ထောကျ ခံ သူ တှေ ကိုယျတိုငျ မ လိုလားတာ မွငျ အောငျ ကွညျ့ရငျ မွငျပါလိမျ့ မယျ ။
ပထဝီ နိုငျ ငံ ရေး ၊ က မ်ဘာ့နိုငျ ငံ ရေး ၊ မွနျ မာ နိုငျ ငံ ရေး ၊ သ မိုငျး နိုငျ ငံ ရေး အ သေ အ ခြာ နား မ လညျ ပဲ လား နား လညျ ပါ ရဲ့ နဲ့ လား မ သိ မွနျ မာ နိုငျ ငံ မှာ စဈ တပျ မ ရှိ လညျး ရ တယျ NLD မ ရှိ လို့ မ ရ ဘူး ဆို တဲ့ သ ဘော မြိုး တိုငျး ရငျး သား လကျ နကျ ကိုငျ တဈ ရာ ( ၁၀၀ ) လောကျ ရှိ တဲ့ မွနျ မာ နိုငျ ငံ ထဲ မှာ ပွော နေ ကွ တာလညျး တှေ့ ရ တယျ ။
NLD နဲ့ စဈတပျ နဲ့ မသငျ့ မွတျ ရငျ တိုငျး ပွညျကို အခုလို အ ခွေ အ နေ အတိုငျး ဖွဈ နေ မှာ ပဲ ။ အ မြှျော အ မွငျနညျး တဲ့ စ ကား တှနေဲ့ စညျးရုံး တာ မြိုး တှေ သှေး ခှဲတာ မြိုး တှေ ကိုယျ တှေ က စ ပွီး ရပျလိုကျသငျ့ ပွီ လို့ ယူ ဆ တယျ ။
နိုငျ ငံ အခုလို အ ခွေ အ နေ အတိုငျး ဖွဈ နတောကို ဘယျသူ တှေ ပို ကွိုကျ နေ ကွလဲ ၊ ဘယျသူ တှပေို အကြိုး ဖွဈ နေ ကွလဲ ဆိုတာကို မကျြ စိ နညျး နညျး ပို ဖှငျ့ ပွီး နောကျ ကို ကြျော ကွညျ့ ကွညျ့ ပါ လို့ နညျး နညျး ပွော ခငျြ ပါ တယျ ။
အမှနျကို မ မွငျ နိုငျ ရငျ မေး ပါ ။ ကိုယျထငျတာ နဲ့ လြောကျ ပွော လြှောကျ လျော မ နေ ကွပါ နဲ့ ။
မွနျမာ နိုငျငံကို ပေါငျမုနျ့ နဲ့ ဒိနျခဲ စား ပွီး ခဈြ ပွ နေ ကွ တာ တှေ ၊ aircon ခနျး ထဲ ဝိုငျ ( wine ) သောကျ ပွီး စညျး လုံး ရ မယျ့ ၂ ဖှဲ့ ကို ရနျ တိုကျ ပေး နေ ကွ တာ တှေ က နေ တ ကယျ ဖွဈ သငျ့တာ တှေ တတျစှမျးသ လောကျ အ ပွု သ ဘော အ ကွံ မြိုး ထောကျ ပွ တာ တိုကျ တှနျး တာ မြိုး ကို ပွောငျး လိုကျ ကွ ဖို့ အ ခြိနျ ရောကျ သငျ့ ပွီ ။
တလ ကို သိနျး ၅၀ က နေ သိနျး ၃၀၀ လောကျ အထိ ဝငျ ငှေ ရှိတဲ့ သူ တှေ သဲသဲ လှုတျ ပွ နေ ကွ တဲ့ အခြိနျ မှာ တဈဧက ကို တဈ သိနျး တောငျ မကနျြ လို့ က လေး ကြောငျးစရိပျ အတှကျပါ စိတျ ပူ နေ ရတယျ လို့ ၈ ရကျ နေ့ စ နေ နေ့ က ပွညျ ရှေ တောငျကို သှား တော့ ရှာ ခံ မွို့ ခံ က ပွော တယျ ။
မ လေးရှား မှာ မွနျမာအ လုပျ သမား တှေ တဈပတျ ကို ၂ ယောကျ လောကျ ကိုယျ့ ကိုယျ ကိုယျ သတျ သေ နေ ကွတယျ ။ အ ခု လို ပဲ မ စညျး ရုံး လို့ ၊ မ တိုး တကျ လို့ ၊ မ ခမျြး သာ လို့ ၊ ခွေ ဥ မ ပွငျ ရ သေး လို့ ၊ ၂၅% ရှိ နေ သေး လို့ နဲ့ သာ အ ကွောငျး ပွ နေ ရငျ ပွညျ နယျ တှအေား လုံး UWSA ” ဝ ” ကို လကျ ညိုးထိုး ထောကျ ပွ လာ ကွ လိမျ့ မယျ ။
ဗဟို အစိုးရကို စောငျ့ နေ ရငျ ဘယျ တော့မှ ဖွဈ မှာ လဲ ၊ ဘယျ တော့မှ မ ဖွဈဘူး ဆို တဲ့ အ သံ တှေ ကယျြ လာ လိမျ့ မယျ ။
က ရငျ ပွညျနယျ က ရှေ ကု က်ကို မွို့ သဈ ကိစ်စ က ရေ ရှညျ အတှကျ စဉျးစားရငျ ဗဟိုအစိုးရ အတှကျ မ ကောငျး ဘူး ။ ဒေ သ ခံ တှေ ဖကျက ကွညျ့ ရငျ သူ တို့ အ တှကျ အကြိုးရှိတယျ ။
ကွား က ပွညျ သူ က ထောကျခံရ မလား ကနျ့ ကှကျရမလား ဆို တာ တျောတျော ဆုံး ဖွတျရခကျပါတယျ ။
ဒါ တှေ ကြျော ဖွတျ နိုငျ ဖို့ က ဖကျဒရယျ ဖွဈလာမှ လို့ ပွောရမှာ ဖွဈ ပွီး ၊ ဖကျဒရယျ ဖွဈ ဖို့ က စဈတပျ နဲ့ အစိုးရ အ ဆငျ ပွေ ဖို့လိုတယျ ။
သူတို့ အ ဆငျ ပွေ ဖို့ တှေးမလား ၊ စဈတပျ မရှိလညျး ရတယျလို့ ဝိုငျး လျော ကွ မ လား ။
မိုး တငျ့ ဆှေ ၁၁ ၊ ၈ ၊ ၂၀၂၀ ဗု ဒ်ဓ ဟူး ။
ထိုင်းနိုင်ငံဥပဒေ ချိုးဖောက်လို့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံပြီး မြဝတီပြန်ပို့သည့် မြန်မာ ( ၁၁ ) ဦး အချုပ်ကားပေါ်မှ ထွက်ပြေး
” ရှင်းလေ ရှုပ်လေ ဝူဟန်ရေ “
၁၆ – ၅ – ၂၀၂၀ ရက်နေ့ ၊ ည (၈:၀၀) နာရီ COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက် ၍ သတင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း